Lalaon’ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus : hoy izy ireo | NewsMada
Lalaon’ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus : hoy izy ireo
Mpanazatran’ny Cnaps Sport, i Tipeh:Tsy misy olana ny toeran’ny mpilalaonay, saingy mila maka fitokisana fotsiny. Ilaina koa ny fiovaovan’ny toerana eny ambony kianja. Raha ny fahitako ny Botsoane indray, tena nilalao izy ireo. Nivoatra rahateo ny kitra any aminy fa tsy toy ny taloha. Efa taty amin’ny fizaram-potoana faharoa vao tena nampiasa ilay lohalaharana lavabe ry zareo. Nahafaty iray izy teto ka nahoana isika tsy hahatafiditra koa any ? Vitantsika izany.
Kapitenin’ny Cnaps Sport, i Mick : Efa fantatra ihany ny fomba filalaon’ny Afrikanina. Nataonay ambany hatrany ny baolina ka sahirana izy ireo… Hotohizana izany fomba filalaonay izany fa nahitana fahombiazana.
Mpanazatran’ny Botsoane, i Teenaje Mpote : Tsy tara fa tena fotoana nampidirana ilay mpanafika mihitsy iny ka nahafatesanay baolina. Hitanay fa tena mivoatra ny baolina kitra malagasy. Efa tsapanay tamin’ny lalaon’ny Tana Formation tamin’ny fihaonanay taminy taloha izany. Tsy miova fa tahaka iny ihany ny lalaonay amin’ny fihaonana amin’ny herinandro.
Mpanazatran’ny Elgeco Plus, Menahely Ruphin : Halamina sy harindra ny lalao amin’ny fihaonana amin’ny herinandro. Hampiditra baolina rehefa any. Hohamafisina ny fanafihana ary tokony hahomby isika. Omena fankaherazana ara-tsaina ny mpilalao. Tokony nahazoana vokatra ny teo amin’ny fizaram-potoana faharoa saingy tsy nahomby isika.
Kapitenin’ny Elgeco Plus, i Morelin: Ilaina manana fitokisana ny mpilalao satria lalao lehibe iny. Hita fa somary taitaitra ihany ny namana sasany teny ambony kianja ka tsy nahafaty baolina na tokony ho mora aza izany. Na izany aza, hiezaka izahay amin’ny lalao miverina any Afrika Atsimo.
Mpanazatran’ny Supersport, i Baxter : Sahirana ihany izahay teo ka tsy maintsy hanova ny fomba filalao amin’ny fihaonana manaraka. Na izany aza, nilalao tsara daholo ny rehetra. Tsara koa ny fomba fitsarana. Tokony ho nahatafiditra baolina izahay saingy tsy nety. Tsy olana ny ady sahala teto… Mbola hisy rahateo ny lalao miverina.
Kapitenin’ny Supersport, i Furman: Mbola nisy mpilalao tsy nilalao androany fa ampidirina rehefa amin’ny lalao miverina… Ny lafiny tanjaka indray, nahazo aina kokoa izahay na teo aza ny lalaonay natao tany Afrika Atsimo sy ny mbola hataonay amin’ny alarobia izao, mialoha ny hihaonana amin’ny Elgeco Plus. Tena tery tokoa ny fotoana ho anay…